हजुरआमालाई मा’रेर स्कुल पुगे, गो’ली हा’नेर १८ जना बालबालिका र शिक्षिकालाई मा’रे – Sandesh Press
May 25, 2022 203
काठमाडौं । अमेरिकाको टेक्सासको एक प्राथमिक विद्यालयमा गो’ली चल्दा १८ बालबालिका र एक शिक्षिकाको मृ’त्यु भएको छ । १८ वर्षीय संदिग्ध बन्दुकधारी साल्भाडोर रामोसले उभाल्डे सहरको रोब एलिमेन्टरी स्कूलमा उक्त घटना गराएका थिए । का’नुनी निकायको कारबाहीमा उनको मृ’त्यु भएको हो ।
संदिग्धले सेमी अटोमेटिक रा’इफल र ह्या’न्डगन बोकेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्।गो’लीबारी ५ देखि ११ वर्षका बालबालिका भएको प्राथमिक विद्यालयमा भएको थियो । मृ”त्यु हुनेमा अधिकांश दोस्रो, तेस्रो र चौथो कक्षाका बालबालिका रहेका छन्, जसको उमेर ७ देखि १० वर्षसम्म रहेको बताइएको छ ।
एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेन्सीले रिपोर्ट गरेअनुसार घटनास्थल नजिकै रहेका अमेरिकी सीमा गस्तीका कर्मचारीहरू तुरुन्तै विद्यालयमा पुगेर मंगलबार बिहान गोलीबारी सुरु हुँदा ब्यारिकेड पछाडि लुकेका आ’क्रमणकारीलाई मा’रेका थिए ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमले रिपोर्ट गरेअनुसार आ’क्रमणकारी सोही क्षेत्रमा उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी थिए भन्ने अनुमान गरिएको छ। उनले दुईवटा मिलिटरी ग्रेड राइफल किनेका थिए र स्कूल आउनुअघि हजुरआमाको हत्या गरेका थिए।विद्यालयको क्याम्पस भित्रका अव”रोधहरू तो’ड्दै उनी कार लिएर स्किलभित्र छिरेका थिए र बुलेटप्रुफ ज्याकेट लगाएर कक्षामा प्रवेश गरेका थिए।
यसलाई सन् २०१२ यता विद्यालयमा भएको सबैभन्दा नराम्रो गोलीकाण्डको रूपमा वर्णन गरिएको छ। सन् २०१२ मा कनेक्टिकटको स्यान्डी हुकको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा भएको आक्रमणमा २० बालबालिका र छ जना कर्मचारीको ‘मृत्यु भएको थियो।सीबीएसका अनुसार संदिग्धसँग एउटा ह्या’न्डगन, एआर-१५ सेमी-अटोमेटिक रा’इफ’ल र धेरै म्यागजिनहरू थिए।
उभाल्डे कन्सोलिडेटेड इन्डिपेन्डेन्ट स्कुल डिस्ट्रिक्ट प्रहरी प्रमुख पीट अर्डोडोनले स्थानीय समय अनुसार राति ११:३० बजे गोली हा’नाहा’न सुरु भएको बताए । अनुसन्धानकर्ताहरू विश्वास गर्छन् कि आक्रमणकारीले यो जघन्य अपराध एक्लै गरेका थिए ।
उभाल्डे कन्सोलिडेटेड इन्डिपेन्डेन्ट स्कुल डिस्ट्रिक्ट डाउनटाउन सान एन्टोनियोबाट लगभग १३५ किलोमिटर टाढा छ। विद्यालयबाट विद्यार्थीहरू ह’टाइएका छन् । करिब ५ सय बालबालिका यसमा अध्ययनरत रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।स्थानीय अस्पतालहरूले विद्यालयका विद्यार्थीहरूको आकस्मिक सेवाबाट उपचार भइरहेको जानकारी दिएका छन्। ६६ वर्षीया महिला र १० वर्षीया बालिकाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको विश्वविद्यालय स्वास्थ्य अस्पतालका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सीबीएसका अनुसार एफबीआईले पनि यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। ह्वाइट हाउसमा आफ्नो सम्बोधनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस्तो गो’लीबारीबारे बयान दिएर आफू “थाकिसकेको” बताएका छन्। उनले बन्दुक नियन्त्रणको कुरा पनि गरे ।उनले ह्वाइट हाउस र अन्य अमेरिकी संघीय भवनहरूमा उभाल्डे पी’डितहरूको सम्मानमा झण्डा आधा झुकाउन आदेश दिएका छन्।
Prevछिटो छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ? उसोभए अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
Nextयी २० कलाकारहरू जाे एकअर्कासँग राम्रो बोलचाल छैनन्, हेर्नुहाेस् पूरा जानकारी….
रेखा थापाको आ”क्रोश : कति पटक यौ-न सं-पर्क भयो सोध्ने ?